Dacwo aan horay loo arag oo ka dhacday Östersund - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Lotta Löfgren/Sveriges Radio
Dacwo aan horay loo arag oo ka dhacday Östersund
La daabacay tisdag 9 juli 2013 kl 10.10
Xeerilaaliyaha maxkamadda rafcaanka ee arrimaha maamulka Lars Magnusson oo qaabbilsan arrimaha dacwooyinka iyo dembiyada dabeecadda wuxuu arbacadii dacwad ku soo oogey degmada Östersund. Waxaana degmadaas lagu soo eedeeyey jeermigii sannadkii 2010 ku fiday biyaha la cabbo.
Intii u dhexeysey 2010 iyo 2011 xilligii qaboobaha waxaa caloolxanuun ku dhacay dad gaaraaya 12 000 qof oo ku noolaa degmada Östersund. Dadkaasina waxay caloolxanuunka qaadeenkadib kolkii av cabbeen biyaha dhuumaha degmada oo uu jirey jeermiga loo yaqaan cryptosporidium. Hadda waxaa arrintaas mas’uuliyaddeeda lagu soo qaadayaa maxkamadda degmada. Sidaas awgeed ayuu maanta xeerilaaliye Lars Magnusson soo gudbiyey dalab uu dehgmada Östersund kaga dalbaayo in ay bixiso saddex milyan oo karoon oo ganaax ah.
– Hawlaha degmada waxaa ka mid ah in ay dadweynaha u ballanqaaddo biyo caafimaad leh. Waxaan u arkaa in ay tahay wax aad u xun in degmo ay ku nool yihiin dad sidaas u badan ay aafeeyaan xanuun safmar ah, ayuu xeerilaaliye Lars Magnusson.
Xeerilaaliyuhu wuxuu qodobada eedeynta ku sifeeyey fal lagu jebiyey xeerka dabeecadda iyo in la sababay dhaawac dad soo gaaray, maadaama uu diyaargarowga degmadu ahaa mid aad u liita.
– Maamulka degmada Östersund kama fekerin wax tixgelin ahna ma siin jeermiga cryptosporidium. Waxaan anigu in dhibaatadaan muddo dheer la ogaa in ay jiraan jeermiyo waxyeelooyin keeni kara, ayuu yiri Lars Magnusson.
Dhanka kale maamulka degmadu ma qabo in ay carqaladi ka jirtey hawlaha ka hortagga degmada.
– Waxaan xaqiijineynna in aannaan wax dembi ah gelin. Waxa dhacay ma ahayn gef dhankayaga ka yimid ee wuxuu jeermi fiday oo aysan suurtagal ahayn in horay loo sii ogaado. Annaga iyo hay’adaha kontaroola hawlahayaga midkoodna mas ii ogaan karin in ay arrintaan dhici lahayd. Sidaasna waxaa yiri Bengt Marsh oo ah guddoomiyaha degmada Östersund.